Science & Religion » ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်သာ ထောင်းပါတော့မည်..(၁)	36
၁၉၈၄ ခုနှစ် ဧပြီလဆန်း ၁ ရက် တနင်္ဂနွေ ၁၃း၀၀
………. ဂျောက် !!!!! ..
CJ # 3302011
2011/03/30 1:01:16 am
View all posts by ဦးဦးပါလေရာ →	Blog
ခင်ဇော် says: လိုက်ခဲ့ ပါ့မယ် ဥဥပါ.. တစ်ခုပြောရရင်
ဦးဦးပါလေရာ says: အနှစ်ပိုင်းကိုတော့ ကိုယ်တိုင်မကျင့်ကြံမှသာ မှားတယ်လို့ ပြောနိုင်မှာထင်တယ် ..
မြစပဲရိုး says: ကြုံတုန်း မှာဗျစီ။
တစ်တို့ နှစ်တို့ မက တစ်ပန်းကန်လုံး တီး မှာ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3552
ဦးဦးပါလေရာ says: ဟိုတစ်လောကတောင်ရောက်သေးတယ်
လုံမလေးမွန်မွန် says: တစ်ခါသား ကျောက်ကွင်းအရေးတော်ပုံဖတ်တော့ အဲဒီထဲက စာသားလေးတစ်ခုကို သတိရမိနေတယ် . . . . တစ်ဖက်က ပြောတယ် . . . ဘုရားက ဝါဆိုလပြည့်နေ့မှာ ပဋိသန္ဓေတည်တယ်ဆိုတော့ ဘုရားရဲ့မိဘတွေက အခါကြီးရက်ကြီးမရှောင် သံဝါသပြုကြတာလားတဲ့ . . အဲဒီအချိန်မှာ ကိုယ်တွေးလိုက်မိတာက အဲဒီခေတ်က ဘုရားတောင် ခုမှဖွားမြင်တဲ့အချိန်မှာ ဝါဆိုလပြည့်နေ့ကို အခါကြီးရက်ကြီးလို့မှ မသတ်မှတ်သေးတာလို့ တွေးပြီး ပြန်ချေမိတယ် . . . ဒါပေမယ့် ဆရာတော်ဘက်က ပြန်ပြောတာက ဘုရားရဲ့ တရားကိုပဲ ဝေဖန်ပါတဲ့ . . . ဒီလို အဋ္ဌကထာဆရာတွေရေးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ထည့်မပြောပါနဲ့လို့ ပြန်ပြောတယ် . . . စကားလုံးတွေကို သေချာမမှတ်မိပေမယ့် အဲဒီသဘောပဲ . . ဘာကိုမှ မရည်ရွယ်ပါဘူး . . . တိုက်ဆိုင်လို့ အကြောင်းအရာကို ပြောပြတာ သက်သက်ပါလို့ . . .
ဦးဦးပါလေရာ says: ဦးပါလဲ ကြုံလို့ (ကြုံခဲတယ်) အဲသည်အဆိုကို ပြန်ပြောချင်တယ်-
လုံမလေးမွန်မွန် says: Karma ဆိုတာ ဟိန္ဒူတွေရဲ့ ကိုးကွယ်မှုများလားလို့ . . . ဦးပါပြောတာ ဇာတ်မြင့်တွေသီးသန့်လား . . .
ဦးဦးပါလေရာ says: သင်္ကြန်စာကိုကြည့်လေ..
kai says: ဟိန္ဒူရဲ့ ပုရာမ်ထဲမှာပဲ.. ဟိန္ဒူကိုးကွယ်သူတယောက်ဟာ.. နောက်ကမုန်ယိုနေတဲ့ဆင်လိုက်လို့…ပြေးရင်းရှေ့က ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းထဲဝင်ပြေးရင် လွတ်မယ်ဆိုရင်တောင်.. ၀င်မပြေးပဲ.. အသေခံရမယ်လို့ ရေးထားခဲ့တယ်မှတ်ဖူးတယ်..။
ဥုံ … Brahma, Vishnu , Shiva Was this answer helpful?LikeDislike 3714
လုံမလေးမွန်မွန် says: အခုနောက်ပိုင်းဆို ဘုရားတောင် တကူးတကမသွားဖြစ်.. အခါကြီးရက်ကြီးဆို ဘုရားသွားတာရှောင်တယ်.. ဘုရားမှာလည်း အောင်မြေတွေ ဂြိုလ်တိုင်တွေ ဘယ်တော့မှ မရှိခိုးဖြစ်ဘူး… တစ်နေရာမှာ အေးအေးဆေးဆေးနေပြီး စိတ်အေးချမ်းအောင် လုပ်တယ်.. ဒီလောက်ပါပဲ… မြတ်စွာဘုရားကိုလည်း လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ပဲ ယုံကြည်သက်ဝင်တယ်.. ဘုရားသည် တန်ခိုးရှင်မဟုတ်.. Was this answer helpful?LikeDislike 12176
Thint Aye Yeik says: ဘာသာရေးဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်
ဦးဦးပါလေရာ says: မဟုတ်ဘူး…
၀င့်ပြုံးမြင့် says: ဒီတစ်ချက်တော့ ကြိုက်သွားပြီ။ လူငယ်က အညစ်အကြေးနည်းတယ်။
ဂျက်စပဲရိုး says: ခု နောက်ပိုင်းမတော့ အဲ့ဒီ ဘုရားဟော ဇာတ်တော် တို့ ငါးရာ့ငါးဆယ် တို့ တန်ခိုးပြခန်းတို့ ဘာကြီးက ဘယ်လို ဖြစ်သွားတယ်တို့ကို အတည် မယူဘဲ ပုံပြင် လိုပဲ သဘောထားတော့တယ်။
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဇာတ်တော်တွေကို ပုံပြင်လို သဘောထားတယ်..အဲဒီအချက်ကို ထောက်ခံပါတယ်.. ကလေးဘဝမှာ ဇာတ်တော်တွေ ဗုဒ္ဓဝင်တွေနဲ့ ကြီးပြင်းခဲ့ရတာ အများကြီး အကျိုးရှိပါတယ်.. မနေ့က အဖြစ်လေးတစ်ခု.. မိသားစုတစ်ခုမှ သမီးလေးက ၂ နှစ်လောက်ပဲ ရှိသေးတယ်.. အဖေကို ပြောတယ်.. လက သမီးကို လိုက်နေတယ်နော် . ဘာလို့လဲတဲ့.. အဖေက ပြန်ဖြေတယ်.. လက လိမ်မာတဲ့ကလေးတွေနောက်ကို လိုက်တယ်တဲ့…ကလေးအတွက်တော့ ဒါက သဘောကျစရာအဖြေပဲ.. ကြီးလာရင် သူ့ဘာသာသူ သဘောပေါက်လာမှပေါ့.. ဇာတ်တော်တွေ ဗုဒ္ဓဝင်တွေကို လူကြီးတွေအနေနဲ့ လက်မခံနိုင်ရင်တောင် ကလေးတွေအနေနဲ့တော့ ရင်းနှီးနေသင့်တယ် ထင်တာပဲ..
ဂျစ်စူ says: အူးလေးတို့ဖာသာ ကြိုက်ရာ ဘာသာ ကိုးကွယ်ဗျာ
kai says: အဲဒါကြောင့်ထင်တယ်…
မကောင်းတာတွေလုပ်လို့.. ကောင်းသူတွေခံလိုက်ရတာတွေ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: သူတို့ တွေ စိတ်အင်မတန်ချမ်းသာ အေးချမ်း နေတယ်လို့များ ထင်သလား သူကြီးမင်းရယ်။
kai says: ဟီး..
ကိုယ်ချင်းရယ်မှ မစာနာ..။ မီလီယံမနာပါနဲ့ဦး.. ဒေါ်လာ ၁သိန်းပဲ (မသုံးပါနဲ့ဦး).. လက်နဲ့ထိပြီး.. အိပ်ယာဘေးထားလို့.. တညအိပ်ကြည့်ဦး..။
နတ်ပြည်… နတ်ပြည်.. အိပ်မက်လှလှများနဲ့.. နတ်ပြည်…။ Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ကိုယ့်ထူးကိုယ်ချွန် သူဌေးများ ကို မပြောပါ သူကြီး ရယ်။
ပုံမှန် သာဆို ဒီလောက် ချမ်းသာနေမှ ဆယ်သက်စားမကုန် တဲ့ စည်းစိမ်တွေ နဲ့ အေးချမ်းစွာ ဇိမ်ရှိရှိ ပျော်ပျော်ကြီး နေလိုက်တော့မပေါ့။ Was this answer helpful?LikeDislike 6346
ဂျစ်စူ says: တချိန်က ပြုဖူးတဲ့
လုံမလေးမွန်မွန် says: ပိုက်ဆံကတော့ ရှိချင်တာပဲ… လိုချင်တာတွေ မဝယ်ရတိုင်း… သုံးချင်သလို မသုံးရတိုင်း စိတ်ညစ်တာလည်း အမှန်ပဲ.. ဒါပေမယ့် လစာထုတ်လာတဲ့ရက်များဆို ကားစီးရင်း လမ်းသွားရင်း ကိုယ့်အိတ်လေးကို ဂရုစိုက်နေရတာ အမောပဲ.. ဘုရားသွားရင်တောင် အိတ်ကို ဘေးချပြီး ဘုရားရှိခိုးရတာ စိုးရိမ်စိတ်ကလေးနဲ့… ခရီးထွက်ပြီး အိမ်တံခါးအလုံပိတ်သွားရင်တောင် မတော်တဆ မီးဘေးရေဘေးဆို ငါ့ certificate လေးတွေများ ပါသွားလေမလားဆိုပြီး တွေးပူနေရတာ… ငှယ်.. ပိုင်ဆိုင်တာများရင် ပိုပူလောင်သလို.. ဟိဟိ
ဘလူးလေဘယ်လေးနဲ့… Was this answer helpful?LikeDislike 6346
ဂျစ်စူ says: ဖားစား ခိုးသောက် ဘလူးလေဘယ် တစ်လုံးလောက်ကတော့
မြစပဲရိုး says: အဲဒီလို ငြိမ့်နေစေချင်တာ မငြိမ့်ဘဲ
ပျင်းတကာ့ ထိပ်ခေါင်တင် says: သဂျီးက ချက်ချင်းလက်ငင်းပဲ ကြည့်တာကိုးဗျ..
kai says: အချိန်ဘယ်လောက်စောင့်ရမှာလဲဟင်င်…
အဖြေကထွက်မလာ…။ Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ဒီနေ့ နယုန်လပြည့်။
uncle gyi says: ကောင်းတာလုပ်လို့ကောင်းကျိုးပေးမဲ့အချိန်ဘယ်အချိန်လဲမသိပေမဲ့
kai says: ကောင်းတာလုပ်ရင်.. ကောင်းတာဖြစ်မယ်ဆိုတာ.. တော်တော်အူကြောင်ကြောင်နိုင်တာကိုပြောချင်သွားတာပါ…။
ဒီလိုလက်တွေ့ကျတာကို ထောက်ခံပါကြောင်း..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: ဘာမှဝင်မပြောသေးဘူး…ဖတ်နေတုန်းပဲ..ဇတ်လမ်းဆုံးမှပြောတော့မယ်
.ကျုပ်ပဲဗျ..လှမ်းခေါ်နော Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9265
ဦးကြောင်ကြီး says: မေမေဘယ်မှာရဲ…
ဦးကြောင်ကြီး says: အသိဆိုတာ အကြောင်းအရာ တခုထဲကိုပဲ အဆင့်ဆင့် ရှိတယ်။ အလွယ်ဆုံး ဥပမာပေးရရင် ငယ်သာအဓိကဆိုတဲ့ အသိ ပညာနည်းသူမှာ ရှိတယ်၊ ပညာ တတ်လာတော့ အတွေ့အကြုံစုံလာတော့ အရောင်တွေပြောင်း အသိတွေ အဆင့်ဆင့်တက် (ဘီလျံနာ ဖြစ်ဖြစ်၊ ပီအိပ်ခ်ျဒီ နှစ်ထပ်ကွမ်းရရ) နောက်ဆုံးတော့ ငွေသာအရေးအကြီးဆုံး ကိန်းပြန်ဆိုက်တယ်။ ဘယ်လောက် လာဘ်တွေ့ကျကျ၊ ဝိပသနာလိုက်လိုက် (သညာအသိကျော်ခဲ့ရင်ပေါ့လေ) ပြန်ချုပ်ရင် စာကို မကျော်နိုင်တာ တွေ့ရတယ်။ အသိတွေ ပြောင်းပုံပြောတာနော်.. စာသမားမှန်တယ် ပြောတာမဟုတ်…။ ပြင်ညာရှိ ငပိကျစ်ခဲမို့ သတိပေးတာပါလှေ…
၀င့်ပြုံးမြင့် says: ဘာသာရေးသဘောကို လက်တွေ့ဘ၀ထဲ ယူမယ်ဆိုရင်— ဥပမာ တရားသူကြီးက အမှုကို မမှန်မကန် ဆုံးဖြတ်ပြီး နစ်နာသွားသူဘက်ကို “ပြုသူအသစ် ဖြစ်သူအဟောင်း” “၀ဋ်ဆိုတာ မနေပါဘူး” စသဖြင့် ပြောလိုက်ရင် ဘာဖြစ်သွားမလဲ။ ပြစ်ဒဏ်သင့်ရမယ့်လူကလည်း သူပြစ်ဒဏ်မခံရလို့ တရားသူကြီးကို ကျေးဇူးတင်မယ် မှတ်သလား။ ငါကွ ဆိုပြီး ပိုတောင် ထောင်လွှား၊ ပိုတောင် မဟုတ်တာ လုပ်ဦးမယ်။ စိန်သဌေး ငွေသဌေး ဘီလီယံနာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ စိတ်လက် ချမ်းသာတာမှ ဟိုဘက်တောင် လွန်နေပါသေးတယ်။ သူတို့ကိုယ် သူတို့တော့ သူတော်ကောင်း။ နောင်ဘ၀အရေး တွေးလို့ စိတ်ဆင်းရဲဖို့ နေနေသာသာ ဘုရားဆုတောင် ပန်နေကြဦးမယ်။ မဟုတ်တဲ့လူတွေက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သူတော်ကောင်း အထင်ဆုံးပဲ။
ဦးဦးပါလေရာ says: လောကကြီးက အားကြီးသူက အနိုင်ယူ အားနည်းသူက အနိုင်ကျင့်ခံနစ်နာရတဲ့အဖြစ်တွေပဲ
kai says: ဒီအပြောကတော့… ဘာသာတရားသမားတွေကို.. မှတ်ကရောလို့.. ပြောလိုက်သလိုပါပဲ..။
သိပ်တော့ မဟုတ်သေးလို့ထင်သဗျ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.